Ny fanamarinana dingana roa an'ny WhatsApp dia azon'ny rehetra izao | Vaovao IPhone
Ny fanamarinana dingana roa an'ny WhatsApp dia efa azon'ny rehetra izao
Iza no nahita ary iza no mahita anao. Talohan'ny WhatsApp dia azon'ny Facebook, ny fampiharana fandefasan-kafatra dia navaozina tara be sy tena ratsy. Nanomboka tamin'izay, tonga haingana dia haingana ireo fanavaozana ary misy lanjany lehibe. Ny vaovao farany mikasika ny fampiharana fandefasan-kafatra be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao dia ny hoe nanisy teboka fiarovana iray hafa izy ireo: ny Ny fanamarinana XNUMX-dingana dia efa azon'ny rehetra izao mpampiasa, na tokony ho fotoana fohy.
Alohan'ny hanohizako dia tiako ny hanazava zavatra iray: ny sasany aminareo angamba efa nahita an'io endri-javatra io talohan'izay, saingy ora vitsy lasa izay vao nampavitrihan'ny WhatsApp ny endriny ho an'ny rehetra. Raha ny marina, ny fiarovana vaovao nandritra ny volana maro no nosedraina ary vao androany vao "nanindry ny bokotra" izy ireo vao nanomboka niseho tamin'ireo mpampiasa WhatsApp rehetra.
Zava-misy izao ny fanamarinana dingana roa an'ny WhatsApp
vaovao asa tsy voatery ary azo alaina avy amin'ny (WhatsApp) Fikirana / Kaonty / Fanamarinana roa-dingana / mampihetsika. Raha vantany vao navadika isika dia afaka manamarina ny nomeraontsika amin'ny fampiasana isa maridrefy enina rehefa mametraka WhatsApp amin'ny fitaovana vaovao. Ho fanampin'izay, raha vao ampandehanana ny safidy dia angatahina mailaka hampiasaina izahay handefasanay rohy hanafoanana ny fanamarinana dingana roa raha toa ka hadinonay ilay kaody. Mba tsy hanadinoantsika dia hanontany antsika indraindray i WhatsApp amin'ny fomba mitovy amin'izay mitranga amin'ny kaody famohana antsika amin'ny fitaovana iOS na dia mampiasa Touch ID aza isika.
Manokana, Tsy manana ny safidy azo ampandehanana aho satria mieritreritra aho fa tsy ilaina izany. Raha heverintsika fa ny hiditra WhatsApp dia tsy maintsy mandefa kaody ho an'ny nomeraon-telefaonintsika izy ireo, tsy maintsy very ilay telefaona isika, misy mahita azy ary te-hiditra ao amin'ny WhatsApp, izay toa tsy dia hitako loatra. Ahoana ny fahitanao azy?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Ny fanamarinana dingana roa an'ny WhatsApp dia efa azon'ny rehetra izao
Raha manana nomeraon-orinasa ho an'ny WhatsApp aho ary mijanona tsy miasa ao amin'io orinasa io, moa ve ilay mahazo ny laharako taloha, rehefa mametraka WhatsApp, hiseho ve ireo resaka taloha nataoko?
Salama Javier. Raha tsy miova ny kaonty iCloud ary misy backup, ny mpiasa vaovao dia hanana ny dika mitovy amin'ny resaka sy ny fifandraisana mitovy aminy, raha mbola tsy voafafa ireo fifandraisana ireo.
Mba hisorohana an'izany dia tokony hamafana ireo fifandraisana manokana aminao amin'ilay telefaona sy ny backup iCloud.
Misaotra, Pablo, ny nomeraoko ihany no azonao, izany hoe, na ilay terminal nampiasako azy na ilay karatra sim izay ananako, dia mitovy isa fa manana sim vaovao.
Antonio Arauco dia hoy izy:
Eny, toa hevitra tsara ho ahy izy io, raha ny marina dia tiako ny hanana azy io izao satria tany ivelan'ny fireneko aho, ary nividy nomera mialoha aho, simba ny telefaoniko ary nividy vaovao aho, ary tsy nisy, tsia ny fahazoana ny sms fanamafisana (any ivelany aho miaraka amina isa hafa) tsy afaka mamela ny whatsapp aho.
Valiny tamin'i Antonio Arauco
Ady Total Rome, QuickScan, The Blocking Dead ary lalao sy fampiharana maimaimpoana na misy fihenam-bidy mandritra ny fotoana voafetra
Google Photos manatsara ny hafainganam-pandeha fampidinana backup